Ny ankabeazan'ny browser ankehitriny dia mamela ny fitantanana Cookies amin'ny fomba 3 samihafa:. Ny browser dia mety misy koa ny fahaizana mamaritra tsara izay Cookies mila ekena ary iza no tsy. Manokana, ny mpampiasa dia afaka manaiky an'ireto safidy manaraka ireto matetika:. Ho fanampin'izay, ny mpitsikilo dia afaka mamela ny mpampiasa hijery sy hamafa ihany koa Cookies tsirairay.
Manana fampahalalana bebe kokoa momba Cookies ary: Wikipedia. Mety hampiantrano ity tranokala ity web beacon fantatra koa amin'ny hoe bibikely tranonkala. ny web beacon mazàna izy ireo dia sary kely misy pixel iray isaky ny pixel iray, hita na tsy hita, napetraka ao anatin'ny kaody loharano an'ireo pejin-tranonkala.
ny web beacon manompo ary ampiasaina amin'ny fomba mitovy amin'ny Cookies. Ankoatr'izay, ny web beacon Matetika izy ireo dia ampiasaina handrefesana ny fifamoivoizan'ireo mpampiasa mitsidika pejy web iray ary afaka mahazo lamin'ireo mpampiasa tranonkala iray. Manana fampahalalana bebe kokoa momba web beacon ary: Wikipedia. Amin'ny tranga sasany, mizara fampahalalana momba ny mpitsidika an'ity tranonkala ity izahay amin'ny fomba tsy fantatra na miaraka amin'ny antoko fahatelo toy ny mpanao dokam-barotra, mpanohana na mpanamarina ho an'ny tanjona tokana hanatsarana ny serivisinay.
Ireo asa fanodinana rehetra ireo dia hifehezana araka ny lalàna mifehy ary ny zonao rehetra momba ny fiarovana ny angon-drakitra dia hajaina mifanaraka amin'ny lalàna ankehitriny. Ity tranonkala ity dia mandrefy ny fifamoivoizana amin'ny vahaolana samihafa azonao ampiasaina Cookies o web beacon handinihana izay mitranga ao amin'ny pejinay.
Mampiasa ireto vahaolana manaraka ireto izahay izao handrefesana ny fifamoivoizana an'ity tranonkala ity. Azonao atao ny mahita fampahalalana bebe kokoa momba ny politikam-piainan'ny tsirairay amin'ireo vahaolana ampiasaina ho an'ity tanjona ity:. Ity tranokala ity dia mety hampiantrano ny dokam-barotra, ny mpiara-miasa aminy na ny tambajotra fanaovana dokam-barotra. Ity doka ity dia asehon'ny mpizara dokam-barotra izay mampiasa ihany koa Cookies hanehoana atiny dokam-barotra mifandraika amin'ny mpampiasa. Ny tsirairay amin'ireto mpizara doka ireto dia samy manana ny politikany manokana, izay azo dinihina amin'ny pejin-tranonkalany manokana.
ny Cookies Izy ireo dia rakitra noforonina tao amin'ny fitetezam-paritry ny mpampiasa hanoratra ny asany ao amin'ny tranokala ary hamela fitetezam-paritra bebe kokoa sy manokana. Raha hampiasa an'ity tranonkala ity dia tsy ilaina ny mametraka Cookies. Ny mpampiasa dia tsy afaka manaiky azy ireo na manamboatra ny tranokalan'izy ireo hanakanana azy ireo ary, raha ilaina dia esory izy ireo. Misy ihany koa ny cookies mifandraika amin'ireo tambajotra sosialy ampiasain'ity tranonkala ity manana ny politikan'ny cookie manokana.
Ny tranonkala dia misy lahatsoratra voaomana ho fampahafantarana fotsiny na fampahalalana fotsiny izay mety tsy maneho ny toetran'ny lalàna na lalàna ankehitriny ary manondro ireo toe-javatra ankapobeny ka ny atiny dia tsy azon'ny mpampiasa ampiharina amin'ny tranga manokana. Ny hevitra voalaza ao amin'izy ireo dia tsy voatery taratry ny fomba fijerin'ny AB Internet Networks SL. Ny atin'ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny tranokala dia tsy azo jerena, na ahoana na ahoana, mpisolo ny torohevitra ara-dalàna. Ny mpampiasa dia tsy tokony hihetsika mifototra amin'ny fampahalalana voarakitra ao amin'ilay tranokala raha tsy manantona ny toro-hevitra momba ny matihanina mifanaraka amin'izany.
Fantatry ny mpampiasa ary ekeny fa ny tranokala iray manontolo, misy nefa tsy feno ny lahatsoratra, sary, volavola, rindrambaiko, atiny ao anatin'izany ny firafitra, ny fisafidianana, ny fandaminana ary ny fampisehoana an'io , ny fitaovana audiovisual sy ny sary, dia arovan'ny mari-pamantarana, zon'ny mpamorona ary zon'olon-kafa ara-dalàna voasoratra anarana, mifanaraka amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena izay antoko sy zon'ny fananana hafa ary lalàna any Espana.
Raha heverin'ny mpampiasa na ny antoko fahatelo fa nisy ny fanitsakitsahana ny zon'izy ireo manan-kery ara-tsaina noho ny fampidirana atiny sasany ao amin'ilay tranokala, dia tokony hampandre ny AB Internet Networks SL momba izany toe-javatra izany izy ireo, manondro:. Lazao ny atiny arovan'ny zon'ny fananana ara-tsaina sy ny toerana misy azy eo amin'ilay tranokala, ny fankatoavana ny zon'ny fananana ara-tsaina voalaza ary fanambarana mazava izay andraikitry ny antoko liana amin'ny fahamarinan'ny fampahalalana nomena.
Ny fepetra fampiasana ny tranokala ankehitriny dia fehezin'ny lalàna espaniola. Ny fiteny amin'ny fanoratana sy ny fandikana an'io fampandrenesana ara-dalàna io dia Espaniola. Ity fampandrenesana ara-dalàna ity dia tsy hapetraka tsirairay isaky ny mpampiasa fa hijanona amin'ny Internet amin'ny Internet. Ireo mpampiasa dia afaka manolotra ny Rafitry ny Mpanjifa izay ampiasain'ny AB Internet Networks SL mba hamahana ny adihevitra na fanambarana azo avy amin'ity lahatsoratra ity na avy amin'ny asan'ny AB Internet Networks SL, afa-tsy ny famahana ireo fifanolanana izay miteraka fivoaran'ny hetsika iray mitaky maha-mpikambana azy, amin'izay ny mpampiasa dia tsy maintsy mandeha any amin'ny vatan'ny fikambanan'ny fisotroana mety.
Raha toa ka tsy mpanjifa na mpampiasa ilay mpampiasa, ary rehefa tsy misy fitsipika mifehy ny hafa, dia manaiky ny hanaiky ny fitsarana sy ny fitsarana any renivohitra Madrid ny roa tonta, satria io no toerana famaranana ny fifanarahana, mamela mazava izay faritra iray hafa izay mety mifanaraka amin'izy ireo. Ampahafantarina ny mpampiasa ary ekeny fa ny fidirana amin'ity tranonkala ity dia tsy midika velively, ny fiandohan'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny AB Internet Networks SL.
Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa dia manaiky ny hampiasa ny tranokala, ny serivisy ary ny atiny nefa tsy mandika ny lalàna ankehitriny, ny finoana tsara ary ny filaminam-bahoaka.
tanàna mampiaraka aminny Internet akaiky Madagaskar?
1xbet app – Azo alaina ve ny rindranasan’ny finday ao amin’ny tranokalan’ny bookmaker?.
tranonkala mampiaraka asiana Antananarivo Madagaskar.
Transports terrestres : Une reprise tant attendue.
Ny fampiasana ny tranokala amin'ny tanjona tsy manara-dalàna na manimba, na amin'ny lafiny rehetra, dia mety hiteraka fahavoazana na hisorohana ny fiasan'ny tranonkala mahazatra. Raha ny atin'ny tranokala ity dia voarara:. Ny pejin'ilay tranonkala dia manome rohy mankamin'ny tranokala sy atiny hafa an'ny tompony, mpanamboatra na mpamatsy fahatelo. Ny hany tanjon'ireo rohy dia ny hanome ny mpampiasa fahafaha-miditra amin'ny rohy voalaza sy hahalala ny vokatray, na dia tsy tompon'andraikitra amin'ny tranga hafa aza ny AB Internet Networks SL amin'ny valiny mety ho azon'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo rohy ireo.
Ilay mpampiasa mikasa ny hametraka fitaovana fampifandraisan-davitra ara-teknika rehetra avy amin'ny tranokalany mankany amin'ny vavahady dia tsy maintsy mahazo alalana voasoratra mialoha an'ny AB Internet Networks SL. Ny fametrahana ny rohy dia tsy midika velively amin'ny fisian'ny fifandraisana misy eo amin'ny AB Internet Networks SL sy ny tompon'ny tranonkala nametrahana ny rohy, na ny fanekena na fankatoavana avy amin'ny AB Internet Networks SL momba ny atiny sy ny serivisy. Ny asan'ny remarketing na avy amin'ny mpihaino AdWords mitovy amin'izany dia mamela antsika hanatratra ny olona izay efa nitsidika ny tranonkalantsika teo aloha ary manampy azy ireo hamita ny fizotry ny varotra.
Amin'ny maha-mpampiasa anay, rehefa miditra amin'ny tranokalanay izahay dia hametraka cookie iray fanamarihana hevitra mety avy amin'ny Google Adwords, Criteo na serivisy hafa manome tolotra fanodinana. Ny mpampiasa dia manolo-tena hampiasa amin'ny fomba feno ny tranokala sy ny serivisy azo idirana ao aminy, amin'ny fanarahana tanteraka ny Lalàna, ny fadin-tseranana tsara ary ity fampandrenesana ara-dalàna ity.
Toy izany koa, mandray andraikitra izy, raha tsy alohan'ny, manome alalana an-tsoratra sy an-tsoratra ny AB Internet Networks SL hampiasa ny vaovao voarakitra ao amin'ny tranonkala, ho an'ny mombamomba anao fotsiny, tsy afaka manatanteraka fanararaotana ara-barotra ny atiny izay ananany fidirana. Ity tranonkala ity dia mitahiry rakitra rakitra mifandraika amin'ireo hevitra nalefa tamin'ity tranonkala ity. Azonao atao ny mampiasa ny zonao amin'ny fidirana, fanitsiana, fanafoanana na fanoherana amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ny adiresy adiresy at aktblog teboka com.
Hookie WillieJan lamba famaohana Akanjo akanjo 73040000 - 1 Hook - Vy vy tsy misy borosy
Ity tranokala ity, ireo domains mifandraika ary tompon'ny atiny dia an'ny AB Internet Networks SL. Ity tranonkala ity dia misy rohy mitarika mankany amin'ireo tranonkala hafa tantanan'ny antoko fahatelo ivelan'ny fikambananay. Ny AB Internet Networks SL dia tsy manome toky ary tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny izay voaangona amin'ireo pejin-tranonkala voalaza ireo. Raha tsy nomena alàlana avy amin'ny Express, mialoha sy an-tsoratra avy amin'ny AB Internet Networks SL, famerenana, afa-tsy ny fampiasan'ny tena manokana, ny fanovana ary amin'ny ankapobeny ny endrika fitrandrahana hafa, amin'ny alàlan'ny fomba rehetra, ny rehetra na ny ampahany amin'ny atiny ity tranonkala ity.
Voarara tanteraka ny fanatanterahana, raha tsy misy ny faneken'ny AB Internet Networks SL mialoha, izay fanodikodinana na fanovana an'ity tranonkala ity. Vokatr'izany, ny AB Internet Networks SL dia tsy handray andraikitra, na mety hitranga, avy amin'ny fanovana na fanodikodinanana nataon'ny antoko fahatelo. Noho io antony io dia mampahafantatra anao aho fa azonao ampiasaina ireo zony ireo amin'ny alàlan'ny fangatahana an-tsoratra sy sonia izay azonao alefa, miaraka amin'ny fotokopia ny ID-nao na antontan-taratasy mitovy aminao, amin'ny adiresy paositra AB Internet Networks SL na amin'ny alàlan'ny mailaka, nametaka fotokopia ny ID-nao mba: contact at actualitasblog teboka com.
Alohan'ny 10 andro dia hamaly ny fangatahanao izahay hanamafisana ny fanatanterahana ny zony izay nangatahinao hampiasaina. Ny AB Internet Networks SL dia tsy manome antoka na tompon'andraikitra amin'izany, na amin'ny lafiny inona, na amin'ny karazan'antoka mety hateraky ny:. Ny AB Internet Networks SL dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana mety hitranga noho ny fampiasana tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna an'ity tranonkala ity.
Ny mpanjifa dia afaka mandefa ny fitakiany amin'ny alàlan'ny sehatra famahana olana amin'ny Internet.
Amin'ny ankapobeny, ny fifandraisana misy eo amin'ny AB Internet Networks SL amin'ireo mpampiasa ny serivisiny telematika, hita ao amin'ity tranonkala ity, dia iharan'ny lalàna sy ny fahefana espaniola. Raha misy mpampiasa manana fisalasalana momba ireo fepetra ara-dalàna na fanehoan-kevitra momba ny vavahadin-tserasera ireo dia mankanesa any amin'ny contact at actualblog dot com. Nanambara ny mpampiasa fa nampahafantarina azy ireo ny fepetra momba ny fiarovana ny angon-drakitra manokana, ny fanekena ary ny fanekena ny fitsaboana azy avy amin'ny AB Internet Networks SL, amin'ny fomba sy ny tanjona voalaza ao amin'ity politika manokana ity.
Araka ny lalàna misy ankehitriny, ny AB Internet Networks SL dia tsy manao fanao SPAM, noho izany dia tsy mandefa mailaka ara-barotra izay mbola tsy nangatahana na nomen'ny mpampiasa alàlana. teknolojia Windows sary Apple Android. Zo mangataka fanitsiana raha sendra diso izy ireo. Zo hangataka ny famerana ny fitsaboana anao , raha izany dia tazomin'ny AB Internet Networks SL izy ireo amin'ny fampiharana na fiarovana ireo fitakiana.
Zo hitsipahana fitsaboana : Ny AB Internet Networks SL dia hampitsahatra ny fikirakirana ny angon-drakitra araka ny fomba ilazanao azy, raha tsy noho ny antony manery na ara-dalàna na ny fampiharana na fiarovana ny mety ho fangatahana dia tsy maintsy tohizina. Manan-kery amin'ny fampidinana data : raha sanatria tianao ny hikirakira orinasa iray hafa, ny AB Internet Networks SL dia hanamora ny fitaterana ny angon-drakitrao amin'ny mpitantana vaovao. Zo hamafana ny angona : ary raha tsy maintsy atao ara-dalàna izy ireo dia hamafa aorian'ny fanamafisana anao.
Modely, endrika ary fampahalalana bebe kokoa momba ny zonao: Pejy ofisialin'ny Sampan-draharaha Espaniola misahana ny fiarovana ny angona Fahafahana manaisotra ny fanekena: Raha toa ka nanome alalana ho an'ny tanjona manokana ianao dia manan-jo hisintona izany amin'ny fotoana rehetra, nefa tsy misy fiatraikany amin'ny ara-dalàna ny fitsaboana mifototra amin'ny fanekena alohan'ny nisintonana azy. Fitanana data Data tsy voaangona: Ny data tsy mitambatra dia tazonina tsy misy fe-potoana famafana.
Les actualités à Madagascar du Mardi 18 Août
Fanitsakitsahana ny filaminana Ny AB Internet Networks SL dia mandray fepetra fiarovana ampy tsara hamantarana ny fisian'ny virus, ny fanafihana mahery vaika ary ny tsindrona kaody. Manan-jo hanafoana ny fanekenao taloha ianao amin'ny fotoana rehetra. Firaketana ny hetsika fanodinana data Web sy fampiantranoana: Manana tranokala SSL TLS v.
Handray ny IP-nao izahay, izay hampiasaina hanamarinana ny niandohan'ny hafatra mba hanomezana anao vaovao, fiarovana amin'ny fanehoan-kevitra SPAM ary hahitana ireo tsy fanarahan-dalàna mety hitranga ohatra: ny antoko mifanohitra amin'izany tranga izany dia manoratra amin'ny tranokala mitovy IP , arak'izany toy ny angona mifandraika amin'ny ISP anao.
Toy izany koa, azonao atao ny manome anay ny angon-drakitrao amin'ny alàlan'ny mailaka sy fomba fifandraisana hafa voalaza ao amin'ny faritra ifandraisana. Valio ny fangatahanao, ny fitarainanao ary ny fangatahanao famerenam-bola.
Related manantona tranonkala ao Madagaskar